Muxuu yahay u-jeedka lacagta UK ugu deeqday Soomaaliya? | KEYDMEDIA ENGLISH
Muxuu yahay u-jeedka lacagta UK ugu deeqday Soomaaliya?
In ka badan 271,000 ayaa mar hore ka hayaamay guryahoodii iyagoo raadinaya cunto, biyo iyo daaq; xilli Soomaaliya noqotay dalka ugu daran ee ay abaaruhu saameeyeen ee Geeska Afrika.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ergeyga gaarka ah ee UK u qaabilsan Ka hortagga Macluusha iyo Arrimaha Bini'aadantinimada, Nick Dyer, ayaa booqasho ku yimid Soomaaliya todobaadkaan, si uu ugu baaqo dadaal wadajir ah oo looga hortagayo kororka macluusha daran ee xilligaan dalka ka taagan.
Intii uu ku sugnaa Soomaaliya, Mr Dyer wuxuu ku dhawaaqay yabooh lacagageed oo gaaraya $8 milyan oo doolar una dhiganta (£5.5 milyan oo Pound) oo UK ku taageereyso wax ka qabashada saameynta abaaraha, taas oo lagu kabi doono $10 milyan oo bartamihii bishii hore ay ku dhawaaqday Wasiirka UK ee Afrika, Vicky Ford.
Dowladda Ingiriiska ayaa gargaarkaan u bixineysa si cunto degdeg ah iyo biyo nadiif ah loo gaarsiiyo qoysaska nugul ee sida ba’an ula ildaran abaarta sii siyaadaysa, isla-markaana loo yareeyo dadka cunto yarida uga barakacaya guryahooda oo hadda tirada hayaantay lagu sheegay in ka badan 271,000.
Xaaladda abaarta Soomaaliya ayaa ah mid ka sii daraysa, iyadoo in ka badan 90% dalka ay saameysay abaartu, ku dhawaad ​​5 milyan oo Soomaali ah ayaa gaajaysan, halka 4.6 milyan oo dadkaas ka mid ah ay sanadkaan u bahan yihiin gaar bini’aadantinimo oo degdeg ah, taasoo ay ugu wacan tahay roobabkii baaqday iyo dalag la’aanta dhacday.
Ergeyga gaarka ah Nick Dyer, ayaa kulamo la qaatay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, iyo Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, Axmed Madoobe, iyo Cabdicasiis Laftagareen, iyagoo ka wada hadlay dar darnaanta baahiyaha bini’aadantinimo.
Mr. Dyer, ayaa xusay in xaaladda abaartu ay horseedi doonto khasaare ba’an iyo xasillooni darro hor leh, haddii aan hadda tallaabo wadajir ah iyo mid sare loo qaadin, xilli Shan meelood meel dadka (2.9m oo qof) ayaa horeyba u barokacay taasoo ka dhalatay dhibaatooyin bini'aadantinimo oo hore oo colaado qeyb ka yihiin.
Deeqdaan ayaa la filayaa in lagu taageero ku dhawaad ​​500,000 oo qof oo ku nool Soomaaliya oo dhan si ay u helaan biyo nadiif ah iyo sahay cunto, isla-markaana uga gaashaantaan Isbeddelka cimilada ee gobolka oo dhan sida daran u saameysay, sida lagu sheegay war ka soo baxay boqortooyada Ingiriiska.
Dalku wuxuu ku jiraa xilli doorasho, iyadoo muddadii sharciga ahayd ee hay’adaha dowliga ah ay dhamaatay hal sano ka hor, Xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, ayaana labada gacmood, si gaabis ah ugu haya hoggaanka doorashooyinka iyo gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen, oo xaalkooda si weyn looga deyrinayo.
Safiirka Britain, Kate Foster, ayaa dhankeeda hore u sheegtay in xaaladda abaareed ee dalka ay tahay mid daran, isla-markaana ay malaayiin qof u baahan yihiin gargaar dedeg ah, xilli ay xustay in UK, mudnaan siineyso taageerada dadka ay saameeyeen dhacdooyinka cimilada ee aadka u daran, sida abaaraha iyo fatahaadaha, iyadoo la fulinayo heshiiskii lagu gaaray shir-madaxeedka wadamada qaniga ah.